सय कलाकारकी फेसन स्टाइलीस निलिमा १०
औ सिनेमा ‘देश खोज्दै जाँदा’ मा एक सय जना कलाकारहरुलाई गरेको फेसन डिजाइनबाट भने निलिमा बढी नै सन्तुष्ट छिन् । निलिमाले खुसी व्यक्ती गरिन्,
‘एक सय जना कलाकारलाई फेसन डिजाइन गर्नु आफैमा ठुला कुरा हो । अर्कोकुरा मैले २ वर्षको अवधीमा कुनै सिनेमामा वास्तविक कलाकारको लागी फेसन डिजाइन गर्ने पहिलो अवसर पाएको थिएँ ।’ फेसन स्टाइलिस निलिमा शर्मा सिने क्षेत्रमा
परिचित हुदै गइरहेको नाम हो । निलिमाले सिने फेसनको दुनियाँमा प्रवेश गरेको २ वर्षमै दश वटा नेपाली सिनेमामा फेसन डिजाइन गर्ने अवसर पाइसकेकी छिन् । ‘के यो माया हो’, ‘फेसबुक’ र ‘भिजिलान्ते’ मा निलिमाले गरेको फेसन स्टाइलललाई लिएर रामै्र चर्चा गरियो । प्रदर्शन्मुख सिनेमा ‘बितेका पल’ को
फेसन स्टाइलले पनि बजारमा रामै्र चर्चा दिलाउने निलिमा विश्वास राख्छिन् । उनी आफ्नो पेशाबाट सन्तुष्ट पनि छिन् । भुटानी शरणार्थीको नेपाल बसाई र तेस्रो मुलक ब्याक हुने सपनालाई मुख्य प्लट बनाइएको ‘देश खोज्दै जाँदा’ मा निलिमालाई फेसन डिजाइन गर्न त्यती सहज भने भएन । कारण, शरणार्थी क्यारेक्टर्सलाई क्लिन भन्दा पनि टिपिकल ड्रेसअपमा उतार्नु पर्ने चुनौती थियो । त्यसैले उनी सिनेमाको सुटिङ सुरु हुनु भन्दा एक महिना अगाडी नै दमकको बेलबारी क्याम्पमा शरणार्थीको ड्रेसअप सेन्स अध्ययन गर्न पुगीन् । निलिमाले आश्चार्य व्यक्त गरिन्, ‘मेरो सोचाइ र उनीहरुको ड्रेसअपले फेल खायो । उनीहरुको ड्रेस अप सेन्स शहरीयाहरुको भन्दा कम थिएन् ।’
त्यत्रो जोर ड्रेस कहाँबाट जुटाउनु भयो ? निलिमाले भनिन्, ‘दमक बजारमा हरेक हप्ताको एकदिन हाट लाग्ने रहेछ । म स्थानियसँगै कपडा किन्न हाट जान्थे ।’ बाँकी अरु क्याम्पबाट सहयोग मिल्यो ।’ सिनेमामा अभिनय समेत गरेका भुटानी शरणार्थीलाई धन्यवाद दिदै निलिमा अगाडी बढिन्, ‘सिनेमा रिलिज भएपछि केहीले शरणार्थीले पनि यस्तो ड्रेस लगाउँछन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ती ड्रेसहरु एक महिनाको अध्ययनले फाइनल गरेको डिजाइन हो ।’
‘देश खोज्दै जाँदा’ मा बाबु बोगटी र हेमन्त बुढाथोकी लिड रोलमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रकाश आङदावेको निर्देशन रहेको यस सिनेमामा शाम्तेन भुटियाको एशोसियट डिरेक्सन रहेको छ । ‘देश खोज्दै जाँदा’ मा साम्तेनले नै निलिमालाई फेसन स्टाइलिसको रुपमा रेकुमेन्ट गरेका थिए । भविष्यमा सिनेमा समेत निर्माण गर्ने योजना बनाउँदै गरेकी निलिमा भन्छिन्, ‘मेरो कामलाई सहज पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । अध्ययन पछिको फेसन स्टाइलको रेसपोन्स कस्तो आउँछ ? त्यस्कै प्रतिक्षामा छु ।’ वोल्ड थिएन जियाको डेव्यू हट
गर्ल जीया के.सीको सिनेमा क्षेत्रको ईन्ट्री भने सिम्पल लेडीको रुपमा भएको
थियो । करिब २ वर्ष अगाडी निर्माण गरिएको सिनेमा ‘हो यही माया हो’ मा जियाले सिम्पल लेडीको रोल प्ले गरेकी छिन् । जुन सिनेमा आउँदो जेठ १० गते अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ । ‘हो यही माया हो’ मा उनी नायक राज तिमल्सीनाको अपोजिटमा देखिनेछिन् । दिपक श्रेष्ठको निर्देशन र सुवास गिरीको
यो सिनेमामा लगानी छ । डेव्यू सिम्पल भएपनि अहिले त तपाई पर्दामा धेरै नै वोल्ड देखिनुहुन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा जिया भन्छिन्, ‘म आफुलाई भर्सटायल क्यारेक्टर भन्न रुचाउँछु । म हरेक क्यारेक्टरको लगी फिट छु जस्तो लाग्छ ।’
भर्सटायल हुने भन्दैमा समाजलाई अपच हुने दृश्य दिन मिल्छ ? उनले तर्क गरिन्, ‘मैले समाजकै पात्रहरुको प्रतिनिधित्व गरेको हुँ । मैले हेर्नै नहुने गरी त्यस्ता दृश्यहरु अहिलेसम्म दिएको छैन् । म पनि कुनै परिवारको सदस्य हुँ ।’ जिया अभिनित सिनेमाहरु ‘ए.टि.एम’ र ‘बर्बाद’ लाई अश्लील सिनेमाको संज्ञा दिदै सेन्सर वोर्डले प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । यसबारे जियाको भनाई छ , ‘नेपाली सिनेमाप्रती सेन्सर वोर्ड केही कडा भएकै हो । निर्माता निर्देशकले समाजलाई नै असर पर्ने गरी सिनेमा निर्माण गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् ।’ के अब पनि तपाई प्रदर्शनमै रोक
लगाउनु पर्ने गरी सिनेमामा सिन दिन तयार हुनुन्छ ? उनले भनिन्, ‘कलाकार भएको नाताले म हरेक सिनको लागी रेडी हुनुपर्छ । अर्को कुरा निर्माता निर्देशकको भनाईलाई पनि हामीले सम्मान गर्नै पर्यो नि ।’ निर्माता निर्देशकले त पोर्न सिनेमाको लागी अफर गर्लान रे ? के तपाई त्यस्ता सिनेमाका लागी पनि तयार हुनुहन्छ जिया जी ?
प्रतिस्पर्धामा रेखा र छवि ! १२
वर्षे पती पत्नीको सम्बन्धलाई विश्राम दिएका निर्माता छविराज ओझा र नायिका
रेखा थापा अहिले २ भिन्न सिनेमाको निर्माणको प्रक्रियामा छन् । रेखाले अहिले आफ्नै नाममा रहेको रेखा फिल्मस् व्यानरबाट ‘काली’ निर्माणको सिटिङमा व्यस्त छिन् । जुन सिनेमामा रेखाको लिड रोल रहने छ । जेठबाट फ्लोरमा जाने ‘काली’ लाई हिम ग्याप टासीले निर्देशन गर्दैछन् । निर्माता छवि ओझा भने रेखा फिल्मस टञ्र्ज छविराज प्रोडक्सन हाउसबाट ‘लोफर’ निर्माण गर्दैछन् । डार्क कमेडी श्रेणीको 'लोफर' यही महिनाको अन्तिम हप्ताबाट फ्लोरमा जानेछ । वैवाहिक सम्बन्धले व्रेक पाएपनि रेखा र छविको व्यावसायिक सम्बन्धले ‘हमेशा’
सम्म निरञ्तरता पाएको थियो । तर ‘लोफर’ र ‘काली’ निर्माणले भने यी दुईको सुमधुर सम्बन्ध माथि प्रश्न चिन्ह् लगाइदिएको छ । रेखासँग पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका नायक आर्यन सिग्देललाई छविले ‘लोफर’ मा गेस्ट अपीरेन्समा इन्ट्री गराएका छन् । ‘लोफर’ मा आदित्य विक्रमको डेव्यू निर्देशन रहनेछ । रेखा पनि के कम ? ‘लोफर’ मा ज्वइनको आशा मात्रा देखाइएको संगीतकार वसन्त सापकोटालाई ‘काली’ को म्यूजिक डिरेक्सन गर्न साइन गराएकी छिन् । ‘लोफर’ र ‘काली’ मा देखिएको यो टकरावले रेखा र छविको पछिल्लो सम्बन्धमा धमिलोपना आएको विश्लेषण गरिदैछ ।
वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्गीएपनि रेखाले छविलाई
‘मामु’ भन्ने क्रममा घटेको थिएन भने रेखालई मेरो ‘हिरो’ हो भन्न छविले कही
कतै कञ्जुस्याइँ गरेका थिएनन् । जस्ले गर्दा विश्राम पाएको वैवाहिक सम्बन्ध पनि प्रश्नवाचक चिन्ह्मै रहेको थियो । तर ‘लोफर’ र ‘काली’ मा देखिएको रेखा र छविको टकरावले भने यी दुईको सम्बन्धले जराबाटै पूर्णविराम पाएको चर्चा चल्न सुरु भैसकेको छ । सतहमा यस्तो देखिएपनि भित्रि रहस्य के हो ? रेखा र छविलाई नै थाहा होला । रमेश त्वायनाको नयाँ प्रोजेक्ट 'आधि बाटो'
पछिल्लो समय एनआरएनहरू नेपाली कलासंस्कृतिको जगेर्ना गर्न तथा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तार गर्न लगानी गर्दै आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेका छन् । यहि क्रमलाई निरन्तरता दिंदै लक्जम्बर्गका एनआरएन रमेश त्वायनाले नयाँ प्रोजेक्टको घोषणा गरेका छन् ।
हामी तीन भाई, भरोसा र हाँसि देउ एक फेर जस्ता चलचित्र निर्माण गरिसकेका त्वायनाले फिल्मीखबर मार्फत 'आधि बाटो' नामको नयाँ प्रोजेक्ट निर्माणको घोषणा गरे । जेठो छोरा राउलको नामबाट 'राउल प्रोडक्सन' नामको कम्पनी स्थापना गरी उनले फिल्म बनाउने निर्णय गरेका हुन् । युवानिर्देशक सबिर श्रेष्ठलाई लिएर निर्माण गर्न लागेको सो चलचित्रको हाल स्क्रिप्टको काम भईरहेको निर्माता त्वायनाले बताए । उनले दिएको जानकारी अनुसार चलचित्रको सुटिङ भाद्र महिनाको पहिलो साता गरिनेछ ।
एउटा उद्देश्य बोकेर हिंडेको व्यक्तिले बाटो भुलेपछि कस्ता कस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्छ भन्ने थिममा आधारित रहेर निर्माण शुरू गर्न लागिएको सो चलचित्रको कथा गायक तथा नायक यश कुमारले लेखेका हुन् भने संगीत पनि उनैको रहने छ । युवाहरूको साथ लिएर फरक कन्सेप्टमा फिल्म बनाउन लागेको बताउँदै निर्माता त्वायना सबिरलाई लिनुको कारण बारे प्रस्ट्याउँदै भन्छन्, 'मेरो स्क्रिप्टलाई न्याय गर्न सक्ने निर्देशक सबिर नै देखेर मैले लिएको हुँ । यस पटक हामी केहि नयाँ प्रयोग गर्दैछौं ।'
नम्रता कलिउडमा अनुबन्धित
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ सिनेमा ‘कलिउड’मा अफिसियल्ली अनुबन्धित भएकी छिन् । उनले सहाना बज्राचार्यलाई रिप्लेस गरेकी छिन् । निर्देशक नवराज आचार्यले नम्रतालाई अनुबन्धित गरिएको जानकारी दिए । नेपाली अभिनेत्रीहरूको उतारचढावपूर्ण करियर चित्रण गर्ने सिनेमामा नम्रताको मुख्य भूमिका हुनेछ । यसअघि सहानाले व्यस्तताको कारण जनाउँदै अन्तिम समयमा आएर सिनेमा छाडेकी थिइन् । नम्रता अब आर्यन सिग्देलको अपोजिटमा देखिनेछिन् । ‘मेरो एउटा साथी छ’पछि आर्यन र नम्रताले अनस्क्रिन रोमान्स गर्न लागेका हुन् । आगामी महिनादेखि छायांकन सुरु हुने सिनेमालाई कुमार खड्काले निर्माण गर्नेछन् । पछिल्लो महिना नम्रताले ‘कलिउड’सहित ‘छड्के’ र एक अनटाइटल प्रोजेक्ट साइन्ड गरेकी थिइन् । उनले कलिउडमा अभिनेत्री पात्रको भूमिका चित्रण गर्नेछिन् ।
सायद : मे १९ मा बेलायत रिलिज
प्रतीक्षित सिनेमा ‘सायद’ जेठ ६ गते बेलायतमा रिलिज हुनेभएको छ । नेपाल, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र डेनमार्कबाट विश्वब्यापी रिलिजपछि सिनेमा संयुक्त अधिराज्यमा प्रदर्शन हुनेछ । उक्त मितिमा ‘सायद’ ट्रिटी सेन्टर, पउल रब्सन थिएटर, हाइ स्ट्रिट, हाउनस्लो र टीडब्लु थ्री आइएसमा प्रदर्शन हुनेछ । रेड चिल्ली इन्टरटेनमेन्ट र इभेन्ट्स एन्ड आइडियाजले लन्डन प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् । पहिलोपटक एउटै मितिमा नेपालसहित चारदेशमा रिलिज हुने ‘सायद’ पहिलो सिनेमा बन्नेछ । सुरज सुब्बा निर्देशित सिनेमालाई सुनिल रावलले निर्माण गरेका हुन् । संयम पुरी, विल्सनविक्रम राई, किशोर सम्वाहम्फे, मञ्जु दाहाल, सुनिल रावल, झरना थापाको मुख्य अभिनय छ । इजरायल र कोरियामा सिनेमा रिलिज भैसकेको छ । सिनेकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन
सिनेमा प्रेमी प्रधानमन्त्रीको विशेषताले परिचित डा. बाबुराम भट्टराईले सिनेकर्मीलाई पुरानै बाचा अनुरूप आश्वासनको पोको फेरी एक पटक फ्याकेका छन् । प्रगतिशिल तथा देश भक्त साँस्कृतिक मञ्चले आईतबार २० जना कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले पुरानै बाचा अनुरूप कलाकारलाई स्वयंसेवीको रूपमा खट्न निर्देशन दिएका हुन् । 'राजनीतिक दलका नेतालाई खबरदारी गर्न तपाईहरूकै हात छ तसर्थ तपाईहरूको खबरदारी विना संविधान निर्माणको ध्यान अन्त जाला त्यसकारण संविधान नबनुन्जेल स्वयंसेवीको रूपमा तपाईहरूको खबरदारी अझै जुरूरत छ', बाबुरामले भने ।' कार्यक्रममा मह जोडी हरिबंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, गितकार डा. कृष्णहरी बराल, गायक रामकृष्ण ढकाल, संगीतकार चेतन सापकोटा लगायतका २० श्रष्टाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको हातबाट सम्मान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता हरिवंश आचार्यले आफूहरू कुनै बादी नभई मह बादी भनी आफ्नो मन्त्वय सुरू गर्दा उनको र प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यङ्ग्य प्रहार चलेको थियो ।
हरिबंशले कार्यक्रम आयोजक प्रगतिशिल समाजलाई केन्द्रबिन्दू बनाउदै जनतालाई दुःख दिने नेता अगतिशिल र सुख दिने नेता प्रगतीशिल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएपछी जवाफमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले हरिबंशले सुरू गरेको मह बादीलाई संक्रिण सोच भएको व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए भने अगतिशिलको कुरामा उनले आफ्नो तर्क अघि सारेका थिए । यध्यपी आउदो जेठ १४ सम्म संविधान बन्ने बिषयलाई उनले दाबी गर्दा तालीको पर्राराले हल गुञ्जयमान भएको थियो ।
सुरज सुब्बासँग जीन्दगी काम गर्ने छैन : हर्षिका
पक्कै पनि नायिका हर्षिका श्रेष्ठको चित्त धेरै नै दुखेको रहेछ । शनिबार एक म्यूजिक भिडियो सुटिङका क्रममा भेटिएकी हर्षिका निकै भावुक मुद्रामा थिईन् जतिबेला फिल्मीखबरले उनलाई मेरो भ्यालेन्टाईनबाट निकालेको बिषयमा विभिन्न प्रश्न गरेको थियो । सुरज सुब्बाको निर्देशनमा बन्न लागेको सो सिनेमामा हर्षिका हिरोईन हुने कुरा थियो तर अकस्मात आफ्नो स्थानमा निता ढुङ्गानालाई सुब्बाले लिएपछी उनी तीन छक्क परेको बताउछिन् । उनी भन्छिन्, 'अरू कसैबाट सिनेमाको मुर्हुत हुदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउदा कस्को चित्त दुख्दैन र ?' चलचित्र बाटो मुनिको फुलको एडिटिङ्ग समय देखि सुब्बालाई नजिकबाट चिनेकी हर्षिकाले बाटो मुनिको फूलको सव टाईटल पनि लेखेकी हुन् जुन लेखाईबाट सुब्बा र उनको दोस्तीयारी निकै बढेको थियो । यति सम्मकी सुब्बाले हरेक फिल्मी कार्यक्रम होस वा ब्यक्तिगत समारोह हर्षिकालाई डोर्‍याएर हिड्न पछि पर्दैन थिए तर दालमा अकस्मात कालो परेपछी यि दुईको सम्बन्धमा अहिले फाटो आएको छ । 'उहाँले मलाई फिल्ममा नखेलाएको बिषयमा कुनै आपत्ती छैन तर खेलाउने भनी झुक्याएर मुर्हुत हुदैछ भन्ने कुरा अरू कसैबाट थाहा पाउदा कस्तो हुन्छ ?', उनले प्रश्न गरिन् । एउटा फिल्ममा भएन त के भयो र अर्को प्रोजेक्टमा तपाईलाई फेरी लिनुहुन्छ होला नि भन्ने फिल्मीखबरको प्रश्नमा उनले भनिन्, 'मेरो लागि उहाँको बोली नै ठूलो कुरा थियो जुन बोलीलाई मैले सपना बनाएर सजाएको थिए तर विना जानकारी बिषय अन्तै मोडिदा म आफै छक्क छु । यति सम्मकी मैले के गल्ती गरे भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छैन । त्यसैले उहाँसंग अर्को प्रोजेक्ट हैन सायद जिन्दगी काम गर्ने छैन ।' अंगालो यो मायाको डेब्यू हिरोईन हर्षिका हाल मिसन पैसा रिलोडेडमा पनि अभिनयरत छिन् । तर निर्देशक सुब्बाले लाष्ट आवरमा फिल्ममा नखेलाएको बिषयलाई उनले जिन्दगीको सवैभन्दा ठूलो चोट भएको बताएकी छिन् । सो घटनापछी उनीहरूको बोलचाल पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । हाल सम्म नौ वटा म्यूजिक भिडियोमा समेत खेलिसकेकी उनी अहिले शारिरीक सौन्दर्यतामा पनि निकै ध्यान दिन थालेकी छिन् । कोक बडी बनाउनु भएछ राज के होला भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, 'यो पिडालाई बिर्सन पनि मैले अझै आफूमा निखारपना ल्याउने सोच अनुरूप डाईटिङमा ध्यान दिन थालेको छु ।' Labels:
-Jire Khursani April 29 Click here -Dohori Ukali Orali April Click here -Aagman Nepali singer Click here -Harke Haldar April 28 Click here -Lokgeet Countdown Click here -Jhadka April 28th Click here -Jivan Chakra April 28 Click here -टेलिचलचित्र: १५ गते मह जोडी Click here -Swor Sangram April 27 Clickhere -Jyogindar Bhole April Click here -The Flop Show April 27 Click here -Jhaikuti Jhai April 26 Click here -डिट्ठा सा'ब April 26th Click here -Ukali Orali April 26th Click here -Tito Satya April 25th Click here -Love n Life हरिहर शर्मा Click here -Yo Sanjha Yo Subash Click here -FM-Mero Katha April 25Click here -420 ko Jhadka April 24 Click here -Saino Kasto April 24th Click here -What the Flop? April 24 Clickhere -Ukali Orali April 24th Click here -Meri Bassi April 23rd Click here -Kill MikeTango April23 Click here -Love and Life April 23 Click here -Jire Khursani April 22 Click here -Dohori Ukali Orali April Click here -Maha Jodi: Laxami Click here -Harke Haldar April 21 Click here -Top 10 Lok Bhaka Click here -Jivan chakra April 21 Click here -टेलिचलचित्र: २०५ मह जोडी Click here -Swor Sangram April 20 Click here -Jyogindar: NRN Makau Click here -The Flop Show April 20 Clickhere -Jhaikuti Jhai April 19 Click here -डिट्ठा सा'ब April 19th Click here -Nepali Ideal April 19 Click here -Ukali Orali April 19th Click here -Tito Satya April 18th Click here -टेलिचलचित्र: यहाँ पिरमा छ मान्छे Clickhere -FM-Mero Katha April 18Click here -Meri Bassi April 16th Click here -Jire Khursani April 15 Click here -Dohori Ukali Orali April Click here -Harke Haldar April 14 Click here -मह जोडी wrong number Click here -Jhaikuti Jhai April 12th Click here -Tito Satya April 11 Click here -Meri Bassi April 9th Click here -Jire Khursani April 8th Click here -Dohori Ukali Orali April Click hereTO WATCH MORE CLICK HERE
2 Harke Haldar3Hijo Aja ka Kura4Ujju Darling5Meri Bassi6Tito Satya7Ghar Beti Ba 8 Venturing Nepal9Yo Maya Bhanne Chiz.. 10 The Pabankali ShowCANADANEPALTHENEPALUSANEPALMOTHERLANDGLAMOUR NEPALMEROCINEMAJPTKHCYBERSANSARNEPALI TV SHOWAZNEPALNEPALITVSHOWCHANNEL ONE . CH
अडियो बाईबलका साथ
Latest Nepali Interview Videos:
Interview With Sunita Dulal Click HereInterview : Sunil Thapa and Mau.. CH..Nepali Comedy Actor Jitu Nepal Click HereNepali Movie Actor Aryan Sigdel Click HereUjja Interview With Biju Bajracharya Click HereInterview With Prasant Tamang Click HereInterview With Rajesh Payal Rai Click Here
PHOTO MAKING WEBSITE;
Jiban Saile Pashupati Hamro cinema Oct 9th Dashain Songs Nepali Movie Song Nepali lok geet Followers
FAMILY PHOTO SLIDSHOW
Dipesh Kishor Bhattarai
सय कलाकारकी फेसन स्टाइलीस निलिमा
वोल्ड थिएन जियाको डेव्यू
प्रतिस्पर्धामा रेखा र छवि !
very simple and Troubles as light as Air, love as deep as Ocean, Friends as Solid as Diamonds, and Success as bright as Gold...
नेपाली पात्रो MOVIES LIVE MUSIC NEPALI FM's INTERVIEW + View More Copyright © 2009 by Therochesternepal